The Ab Presents Nepal » ओली द्वारा प्रचण्डलाई ठुलो धोका ! अब के होला नेकपा को भबिस्य ?
ओली द्वारा प्रचण्डलाई ठुलो धोका ! अब के होला नेकपा को भबिस्य ?
काठमाडौं -: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ‘धोका’ भएको गुनासो सचिवालय सदस्यहरूसँग गर्न थालेका छन्। पार्टी एकताका बेला आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदरी भए पनि ओलीका गतिविधिबाट त्यो पालना नहुने महसुस दाहालले गरेका छन्। दाहालले केही दिनअघि सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई उनकै घरमा भेटेर एकताका बेला भएको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पोखेको स्रोतले बतायो।
पार्टी एकता गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित छ। समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै त्यसलाई प्रचारमा ल्याइएको भन्दै पूर्वएमाले समूह पनि असन्तुष्ट देखिन्छ। आलोपालो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको विषय नभएकाले पनि पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित बनिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा दाहालले पोखरेलसँग भेटघाट गरेका हुन्। दाहालले पोखरेलसँग भेटघाट गरेको दुई दिनपछि वामदेव गौतम पनि माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेका थिए। नेपाल–गौतमबीच ‘धोका’ को राजनीति गर्न नहुने विषयमा कुराकानी भएको थियो।दाहालले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई उनकै निवासमा भेटेर एकताका बेला भएको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पोखेका छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १५ महिना बित्दा पनि पोलिटब्युरो कमिटी, आयोग, मञ्च, प्रवास कमिटीसहित केही केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगो लागेको छैन। ओली सिंगापुरमा हुँदा यी विषयलाई टुंगो लगाउने गरी दाहालको सक्रियता बढेको थियो। सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत काम भने सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पार्टीले यसअघि नै तय गरेका सातै प्रदेशमा पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी कार्यक्रम गर्नेगरी अध्यक्ष दाहाल अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका थिए।एकता सन्देशको कार्यक्रम गत चैतबाटै सुरु गर्ने तयारी भए पनि एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिएकाले रोकिएको थियो। ‘दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने वा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला स्वास्थ्योपचारका क्रममा सिंगापुर जानुअघि ओलीले दाहाललाई बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएर मख्ख पारेका थिए। अहिले अधिकारविहीनजस्तै भएपछि धोका भएको महसुस गरेका हुन्,’ दाहालनिकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार सचिवालय सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेलसँग दाहालले भेट गर्नुको अर्थ आफ्नो सन्देश ओलीसम्म पुगोस् भन्ने ने हो।